Marika fitarihana manerantany: fanapahana / fanoratana / fanamafisana / fanadiovana vy. | Jinan Lingxiu Laser Equipment Co., Ltd.
Marika fitarihana manerantany: fanapahana / fanoratana / fanamafisana / fanadiovana vy.
Lahatsary fohy Lxshow
Metal Tube Ary Plate Fibre Laser Cutting Machine
Masinina fanamarihana Uv
Masinina fanamarihana Co2
Milina fanesorana antsy Cnc
Masinina manapaka antsy maranitra
Masinina manapaka antsy antsy
Vahaolana fanapahana vy
Tabilao fifanakalozana, fahombiazan'ny asa be
Lasana takelaka vy vita amin'ny vy. Mahatratra 1,5G ny hafainganam-pandeha
Tafiditra anaty rano tanteraka amin'ny tontolon'ny mpanjifanay izahay
JPT 12000WW laser metaly sheet sheet milina lx4020p Show
Laser vita amin'ny laser LX4020P 12000W
Laser vita amin'ny vy metaly avo lenta nanapaka fampisehoana LX62TH
Ity horonan-tsary ity dia mampiseho ny toetoetran'ny fiasan'ny cnc vy laser cutter LX62TH, ao anatin'izany:ivelanyPneumatika chuckTabilao fanohananaFampisehoana fanapahana santionany (fantsom-bozaka toradroa, fantsona boribory)
Topimaso momba ny orinasa - Jinan Lingxiu Laser Equipment Co., Ltd.
10 napetraka milina fanapahana laser fisaka ho an'ny Assembling
Fanapahana laser laser 10 ho an'ny mena sy mainty manokana
Azontsika atao koa ny manamboatra fitaovana tsy mahazatra manara-penitra ho toy ny fepetra takiana amin'ny antsipiriany momba anao. Firenena sy faritra 150 mahery, ary manome serivisy OEM mihoatra ny fanamboarana 30 mahery
Manantena ny ho avy, LXSHOW, toy ny mahazatra, ny fikatsahana sy ny sisa, miaraka amin'ny famokarana, ny fitantanana, ny fikarohana ary ny fampandrosoana, tombony be dia be toy ny zava-bita azo antoka, hahazoana ny fanekena sy ny mpiara-miasa matoky eran'izao tontolo izao.
Niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika Malaza eran'izao tontolo izao izahay.
Fanaraha-maso henjana sy fitantanana.
Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa / CD / Serivisy an-tserasera / Fampiofanana maimaim-poana amin'ny orinasa / Fampiofanana eo amin'ny toeran'ny mpanjifa.
Maherin'ny 5000 ny seta / taona novokarina, hanome serivisy matihanina sy ara-potoana amin'ny filaharana rehetra izahay.
Mihoatra ny 150 ny firenena sy ny faritra
Jinan Lingxiu Laser dia naorina tamin'ny Jolay 2004, manana mihoatra ny 500 metatra toradroa ny fikarohana sy ny birao, mihoatra ny 32000 metatra toradroa orinasa.
Ny milina rehetra, nandalo ny fanamarinana ny Vondrona Eoropeana CE, mari-pahaizana Amerikanina FDA ary voamarina ho ISO 9001.
Ny vokatra dia amidy any USA, Canada, Australia, Europe, South East Asia, Africa sns, firenena sy faritra mihoatra ny 120, ary manome serivisy OEM ho an'ny maherin'ny 30.